မီးခုံ | တစ်ဦးက Forex ကုန်သွယ်မှုစနစ်စိတ်ကို
အဆိုပါကုန်သွယ်၏အနေအထားသို့မဟုတ် Forex စျေးကွက် entry ကိုဆုံးဖြတ်ရန် Forex ခုံမီးခုံပုံစံညွှန်ပြချက်အမျိုးမျိုးသောလမ်းညွှန်ချက်များ ,ဒီခုံ Forex ကုန်သည်တစ်ဦးကောင်းအနေအထားကိုအဆုံးအဖြတ်အတွက်အားဖြည့်ကဲ့သို့သောအခြားအညွှန်းကိန်းပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်နှင့်အတူ .
category: မော်ကွန်း: မီးခုံ
BAR PATTERN entry INSIDE ဥပမာ (4)
ganifx/ ဇွန်လ 21, 2017/ မီးခုံ/0မှတ်ချက်များ
bar အတွင်းတွင်ဥပမာ enrty PATTERN (3)
Kali ini kita masih akan memberikan contoh cara open posisi dengan memanfaatkan pola inside bar yang muncul di market, စံနမူနာများကဲ့သို့ကျွန်တော်တစ်ဦးအချိန်ဘောင် D1 အပေါ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ CHF ပေါ်တွင်ပုံရိပ်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော. Pada gambar di bawah dapat dilihat ada dua candlestick yang pertama adalah candlsetick bullish dan yang kedua adalah candlestick bearish. Kalau kita melihat candlestick…
BAR PATTERN entry INSIDE ဥပမာ (2)
BAR PATTERN entry INSIDE ဥပမာ ( 1 )
Kali ini kita akan memberikan contoh cara open posisi dengan memanfaatkan pola inside bar yang muncul di market, seperti contoh di bawah ini kita akan menggunakan gambar pada mata uang Eur Jpy pada time frame D1. Pada gambar di bawah dapat dilihat ada dua candlestick yang pertama adalah candlsetick bearish dan yang kedua adalah candlestick bullish. ကျနော်တို့ဒုတိယခုံကိုကြည့်ပါလျှင်…
အသိပညာ INSIDE BAR PATTERN
Salah satu pola candlestick yang sering muncul di market dan bisa kita jadikan sebagai sebuah strategi adalah Inside Bar. Inside Bar di sini dapat diartikan bahwa ada dua buah candlestick yang mana candlestick kedua high lownya berada di dalamrange candlestick sebelumnya. Pada kasus ini kita tidak memandang warna atau sifat candlestick tersebut, bisa saja candlestick Bullish – Bearish , အီရန်…
BELAJAR POLA ခုံ THREE BLACK Crow
Kali ini kita akan mempelajari salah satu pola pembalikan dari trend naik menjadi trend turun dengan formasi tiga candlestick. Pola candlestick yang akan kita bahas kali ini adalah pola Three Black Crows. ဒီပုံစံမရှိသလောက်ဈေးကွက်ထဲမှာကြုံတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံစံထို့နောက်ပေါ်ထွက်လာလျှင်လွှဲကုန်သည်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ရမည် – ဒီခုံပုံစံတွေနဲ့တကယ်နိုးနိုးကြားကြား. Pola Three Black Crows…
APPLICATION သို့ PATTERN – Forex IN ခုံပုံစံ
ganifx/ မေ 31, 2017/ မီးခုံ/0မှတ်ချက်များ
ကျနော်တို့မီးခုံပုံစံများနှင့် Fibonacci retracement ဆွေးနွေး, ကောင်းစွာယခုကျွန်တော်စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာ၌သူတို့ကိုပေါင်းစပ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်. အတိတ်ကာလမှာတော့ကျနော်တို့ပုံစံပြောဆိုသောင့် – ကောင်းသောမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ပုံစံပွောငျးပွင့်သို့မဟုတ်ဆင်း. တစ်ထပ်အဘို့, pola pembalikan dari trend naik menjadi turun ditandai dengan muculnya pola -pola : Bearish Engulfing, Bearish Harami, Shooting Star, Hanging Man , Dark Cloud…